Real Madrid Oo Ka Mid Ah SIDDEED Kooxood Oo Dalabyo Ka Gudbiyay Xidiga Kooxda Ajax Ee Donny Van de Beek. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Ka Mid Ah SIDDEED Kooxood Oo Dalabyo Ka Gudbiyay Xidiga Kooxda Ajax Ee Donny Van de Beek.
June 30, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Ajax ayaa qarka u saaran in ay lumiso xidig kale oo muhiim u ahaa kooxdeeda xili ciyaareedkii la soo dhaafay waxayna heshay siddee dalab oo kala duwan oo lagu doonayo xidiga khadka dhexe ee Donny Van de Beek.
Kooxaha dalabka u gudbiyay Ajax ee doonaya saxiixa Donny Van de Beek waxaa ka mid ah Real Madrid oo hadda u muuqata in ay badalka Pual Pogba raadsanayso kadib markii ay Man United meel adag istaagtay.
Inkasta oo uu Zinedine Zidane si cad maamulka kooxdiisa Madrid ugu war galiyay in Pual Pogba yahay xidiga uu khadka dhexe ka doonayo, haddana iska caabinta ay Man United samaysay ayaa Perez iyo maamulkiisa ku qasbaysa in ay meelo kale eegaan.
Donny Van de Beek ayaa u furan in uu xagaagan ka baxo kooxda Ajax oo haddaba lumisay Frenkie De Jong oo Barcelona ku biiray iyo De Ligt oo qarka u saaran in uu Juventus ku biiro.
Zidane ayaa kooxdiisa ku haysta Kroos, Modric iyo Casemiro kuwaas oo sanado badan ka soo shaqaynayay Bernabeu lamana oga haddii Donny Van de Beek uu midkood booska kala bixi karo.
Laakiin maamulka Madrid ayaan doonayn in ay Pual Pogba iyo Christian Eriksen ku koobnaadaan waxayna dalab ka gudbiyeen Donny Van de Beek si ay xidigan ula soo saxiixan karaan haddii labada doorasho ee hore guulaysan waayaan.
Donny Van de Beek oo fasax ku qaadanaya Ibiza oo dalka Spain ka tirsan ayaa xaalada Madrid kala tashaday xidigii hore ee xulkiisa ee Sneijder kaas oo Madrid ku soo qaatay intii udhexaysay 2007-2009.
Ilwareed uu helay wargayska AS ee magaalada Madrid ka soo baxa ayuu ku ogaaday in Real Madrid ay ka mid tahay siddeed kooxood oo dalabyo ka gudbiyay Donny Van de Beek.
Wararka ayaa sheegaya in ay hore wada xaajood u yeesheen kooxaha Ajax iyo Real Madrid balse lacagta ay Madrid ku doonayso saxiixa Van De Beek iyo inta ay Ajax ku qiimaynayso ay u dhexeeyeen €15 milyan yuro.
Laakiin kooxaha kale ee Madrid kula tartamaya saxiixa Donny Van de Beek ayaan faah faahin laga bixin iyada oo la ogaa bandhigii fiicnaa ee uu soo sameeyay xili ciyaareedkii la soo dhaafay.